ပင်ရင်းဆိုင် > Eaindray Hmuu Htet
ကုန်ကျစရိတ်: 8 coins
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့တနေ့ တာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာ လွင့်စင်ပျောက်ကွယ် သွားစေဖို့စိတ်ကူးယဉ်စရာကောင်းတဲ့ ရနံ့ သင်းသင်းလေးတွေနဲ့ နှင်းဆီ ဆပ်ပြာလေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး လေပေါ်ပျံဝဲသွားသလို ခံစားသွားရမှာပါ.....
သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သူကိုလက်ဆောင် ပေးရင်လဲ ဒီဇိုင်းလေးက သပ်ရပ်လှပပြီး Romance ဆန်သလို ၊ သင်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လဲ သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့စေမယ်ဆိုတာကတော့ လှပပြီး မွှေးပျံတဲ့ ရနံနဲ့ ဆပ်ပြာလေးကို စမ်းသုံးကြည့်ပါနော်
Eaindray Hmuu Htet
No.45 South Ookalapa
Yangon, ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး 11091
Digital Saving Box
 ၂၀၁၄ နောက်ပိုင်း ယခုကဲ့သို့လုံခြုံရေး သေတ္တာ လေးများဟာ နိင်ငံတကာမှာခေတ်စားလာပါတယ်.. အခုအမျိုးအစားလေးက တရုတ်နိင်ငံ ကနေ ၂၀၁၅ လလယ်ပိုင်းလောက်မှာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၊
 တောတွင်း လေ့လာရေးခရီးနဲ့ တောင်တက်ခရီးတွေသွားပြီဆိုရင် တကိုယ်ရည်သုံး အိပ်ယာလိပ်လေးကလည်း မရှိမဖြစ်ပါရမဲ့ပစ္စည်းလေးပါ...
 ခရီးတိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရက်ရှည်ခရီးပဲဖြစ်ဖြစ် သွားတဲ့အခါ အလွယ်တကူဆောင်သွားလို့ ရတဲ့ အိတ်ဆောင်မှန်ဘီလူးလေးပါ။
 Memory Card သို့ SD Card ဖြင့်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကားများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်...
5.1 Home Theatre ( Leisite Brand )
 ဂီတဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေသလို စိတ်ခံစားမှုကိုပါပြောင်းလဲစေပါတယ်။ မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်အလိုက် သီချင်းတွေကို အိမ်မှာပဲခေတ်မှီဆန်းသစ်တဲ့ပုံစံနဲ့နားထောင်လို့ ရပါတယ်။
Vibration Machine + MP3( Bluetooth)
လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာနဲ့ ခန္တာကိုယ်တခုလုံးကိုထိရောက်စေပြီး လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ချင် ဆေးလဲ မထိရောက်တဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းထိရောက်စေမယ့် အဆီချ တုန်စက်လေးဖြစ်ပါတယ် ။ နေ့စဉ် ပုံမှန်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာကျစ်လစ်လှပစေမှာပါ ။
Aluminium Cookware( One Set )
တောတွင်းခရီး နဲ့ လေ့လာရေးခရီးသွားတဲ့အခါတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်စားသောက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အလူမီိနီယံ အိုးအစုံလိုက်လေးပါ..
အခု အနှိပ်ထိုင်ခုံလေးက ဈေးနှုန်းကလည်း ၅သိန်း ၊ ပစ္စည်းနဲ့ အာမခံပေးထားသေးတော့ အိမ်တိုင်းအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ထိုင်ခုံလေးပါ.......
 (1) GPS Navigation ရန်ကုန်၊ မန်းတလေး၊ နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊ ပြည်၊ မကွေး၊ ပဲခူး၊ မော်လမြိုင်ကားဝင်၍ရသောလမ်းမှန်သမျှ၏ 90% ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။
Sail Display Boat
ကျက်သရေလည်းရှိ ဈေးနှုန်းလည်းတင့်တဲ့ Sail Boat လေးပါ.....
စူးစမ်းလေ့လာလိုသူများ အထပ်မြင့်နေသူများ ခရီးသွားသူများ အဖို့ အမှန်တကယ်ပဲ အသုံးဝင်လှပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများ ထမင်းကိုတော့အချိန်မှန်စားဖို့ လိုပါတယ်….
ကားနဲ့ ကျောင်းကြိုပို့လုပ်တဲ့အချိန် ခရီးထွက်တဲ့အချိန် ကလေးထိန်းဖို့ အဖော်မပါတဲ့ အချိန် တွေမှာ သိပ်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။
AD Tread Mill ( 2017- Wifi A 918 Model )
 ( ၁ ) မိမိဖုန်းမှ သီချင်းများကို MP3 ကြိုးလေးထိုးပြီး သီချင်းနားဆင်ရင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိင်ပါသည် ။
Vegetables Fruit & Cut
 မေမေတို့ ရဲ့သားသားမီးမီးလေး တွေက သစ်သီးလေးတွေကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီး အရောင်နဲ့ အသီးကိုခွဲခြားတတ်သွားမဲ့သစ်သီးခွဲရတဲ့ ကစားစရာလေးပါ...
Electric Guitar & Amp Box ( One set )
 Electric Guitar ဖြစ်တယ် ၊
BMW Umbrella ( In Car )
 " ကိုယ်ပိုင်ကားလေးစီးကြည့်ကြမယ် ".....ကိုယ်ပိုင်ကားစီးရပြီဆိုပါစို့ ..
ခရီးမထွက်ဖြစ်လည်းသင်တန်းသွား၊ကျောင်းသွား၊ အပြင်သွား ပေါ့ပါးပြီး အကြမ်းခံ တဲ့အပြင် ဖက်ရှင်လည်းကျတဲ့ ပြောက်ကျားဒီဇိုင်းတွေပါ....
ကား အပူ အအေး Box
 ခရီးသွားရင်းဖြစ်ဖြစ် ကားထဲမှာ ရေတွေ အအေးဗူးတွေ ထားရင် ကြာလာရင်ပူလာတတ်ပါတယ်
ကလေးအ၀တ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြီးအ၀တ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ် လျှော်လို့ ရတဲ့ အ၀တ်လျှော်စက်လေးပါ.... သင့်ရဲ့ အ၀တ်တွေလျှော်ဖို့ အခက်အခဲရှိနေရင်Mini အ၀တ်လျှော်စက်လေးကို သတိရလိုက်ပါ..
 ရေပိုက်မှာဆန့်နိုင်ကြုံ့နိုင်ပြီးရေပိုက်ထဲရေမရောက်ခင်အရှည် 20 ပေသာရှိပါတယ်...
❖သေးသေးလေးနဲ့ အားကိုးရတဲ့အပြင် ဈေးလည်းသက်သာလို့ အိမ်ရှင်မတို့ဟင်းချက်ရာမှာပိုမို မြန်ဆန်ချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့ ဓားသွေးစက်လေးရောက်လာပါပြီ.....
Y-Pad English Computer
အသက် ၁ နှစ် နဲ့ ၆ လကနေ4နှစ်အရွယ် မှု ကြို ကျောင်းတက်အရွယ်များ အတွက် မိခင် နှင့်အတူ လွယ်ကူစွာ စာသင်ကြားနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပစ္စည်းလေးကို သုံးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်များ English စာစွမ်းရည် မြင့်မာစေ ပြီး A B C D စကားလုံးများကို လွယ်ကူစွာ မှတ်မိပြီး အသံထွက်မှန်ကန်စွာ ထွက်ဆိုပေးခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များ English အသံထွက်ကိုများစွာ အထောက်ကူဖြစ် စေပါတယ် ။
ကြက်ဥကို အချောင်းလိုက်လေးအတိုင်းကြော်ပေးနိုင်သည့်ကြက်ဥ ကြော်စက်လေးပါ..
Slimming shaking belt
 လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ချင် ဆေးလဲ မထိရောက်တဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းထိရောက်မယ့် အဆီချခါးပတ်လေး ပေါ့ .. အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ အသုံးပြု နိင်ပါတယ် ။
မိုးဘယ်လောက်ပဲရွာပါစေ..နေဘယ်လောက်ပဲပူပါစေ..ကိုယ့်မှာ နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာဆောင်းမဲ့ထီးလေး တချောင်း လောက် ရှိနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ပူစရာမလို တော့ဘူးပေါ့…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးလေးတဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကလည်းအတူရှိနေပြီဆိုရင်မိုးစက်လေးတွေရဲ့ အေးမြတဲ့အထိအတွေ့ လေး တွေကနေ ကာကွယ်ပေးမဲ့ Baymax ချစ်စရာထီးလေးနဲ့ အတူ တမိုးအောက်မှာ ချစ်သူလက်ကိုဆွဲ တွဲလို...
အခု ဖော်ပြထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးကတော့ ၄င်း ပြသနာ၂ခုလုံးကို တပြိုင်တည်းဖြေရှင်းပေးပြီး မျက်မှန် ကြီးတပ်မောင်းရလို့ စိတ်အိုက်သူတွေ အတွက်ရော Day ရော Night ရော အဆင်ပြေစေဖို့ ကားမောင်းသူများအတွက် နောက်ဆုံး ထွက်ရှိလာသော အထောက်ကူပြု ပစ္စည်းလေးတခု ဖြစ်ပါတယ် ။
Laser Power Grow Comb
၂၁ ရာစုရောက်လာတာနဲ့အမျှနည်းပညာတွေ ဟာ အံမခန်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ် ။ လေဆာစနစ် သုံးရောဂါ ရှာဖွေရေး ပိုးမွားသန့်စင်တာတွေ အများပြားထဲကမှ ယခု ဘီးလေးကတော့ ဦးရေပြားတွင်ပိတ်နေသောမွှေးညှင်းပေါက်များအားဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်မသန်သူများ ထိပ်ကွက်သူများ ဆံပင်ပါးသူများပြန်လည်ကာပေါက်စေ တာဖြစ်ပါတယ် ..
အခုအသားကြိတ်စက်လေးကတော့ နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်ပေမယ့် အသားကြိတ်စက်များထဲမှာ အဆင်ပြေဆုံးအလုပ်ဖြစ်ဆုံးမို့ တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ပြင်ပစူပါမားကတ်များ အခြား ဈေးကွက်များ မှာ ကျပ် 20000 ကျော်ရောင်းချပါတယ် စက်လေးက သေးလို့ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ရုတ်တရက်မတန် ရဘူးထင်ပေမယ့် သုံးထားတဲ့ ဒါး တို့ ကော်သားတို့မှာ အရည်သွေးမြင့် ပစ္စည်းများဖြစ်တာ ကြောင့် သုံးစွဲ ကြည့်မှ တန်မတန် သိရမှာပါ
Party crystal Music Ball ( Home KTV - Club...
ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ 2015 မှာထွက်ထားတဲ့ အရည် အသွေးမြင့် Party Magic Ball လေးပါ . စိတ်ပင်ပန်းတာတွေ Relax ဖြစ်စေဖို့ မိမိ သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအဖော်များနဲ့ Dance မယ် ကဲမယ် ၀ယ်ပြီးတာနဲ့စိတ်ကြေ နပ်စေရမယ်လို့ အာမခံပါတယ်